ICoronavirus: iifowuni kunye nokusetyenziswa ngolwazi oluchanekileyo | Oomama Namhlanje
ICoronavirus: iifowuni kunye nokusetyenziswa ngolwazi oluchanekileyo
UAna L. | | Iingcebiso, ZeMpilo
Okwangoku siphila ukugcwaliswa kolwazi malunga ne-COVID19, okanye i-coronavirus. Amawaka emiyalezo, iingcebiso, ubuqhetseba… yonke into. Koomama namhlanje sicebisa iifowuni zoncedo zoluntu ngalunye, izicelo ezicetyiswayo kunye namajelo asemthethweni ukuba ukhulelwe.
Ngokwazo zonke iingcali, ulwazi oluninzi lubangela uxinzelelo olunjengokungabikho kwalo. Masifumane imali eseleyo. Masimamele kwaye sibukele iindaba, kodwa masingazikhathazi ngayo kwaye sizame ukufumana iindlela zethu.
1 Ulwazi lweenombolo zomnxeba eSpain
2 Izicelo malunga ne-coronavirus
3 Ulwazi lwabantwana nolwezokubelekisa
Ulwazi lweenombolo zomnxeba eSpain
Ukusukela ialam ekuhlaleni yecoronavirus, kuye kwakho iifowuni ezenziwe zasebenza kulo lonke elaseSpain nakulo lonke uluntu. Khangela enye kwindawo yakho yokuzimela. Oomasipala abakhulu bafaka le nkonzo kwinkonzo yabemi, kwaye iCatalonia inesicelo sovavanyo kubasebenzisi bayo.
I-Andalusia: 900 400 061 ukuba unonxibelelwano nomntu oqinisekileyo kunye ne-955 545 060 (inombolo yefowuni kaSalud Responde) ukubuza imibuzo malunga ne-coronavirus.
Iziqithi zeCanary: 900 112 061.
ICantabria: 112 kunye ne-061.
ICastilla la Mancha: 900 112 112
ICastilla León: 900 222 000.
IMadrid: 900 102 112.
I-Navarra: 112 kunye ne-948 290 290.
Uluntu lwaseValencian: 900 300 555.
IGalicia: 061 kunye ne-902 400 116, ngolwazi ngokubanzi.
Iziqithi zaseBalearic: 061.
ILa Rioja: 941 298 333 kunye ne-112.
UMurcia: 900 121 212 kunye no-112.
Ilizwe laseBasque: 900 203 050.
I-Asturias: 984 100 400,
La iphepha loMphathiswa Wezentlalo kaRhulumenteKwicandelo lezeMpilo yoLuntu, ulwazi oluhlaziyiweyo luyafumaneka kwinani lamatyala kunye neendawo ezichaphazelekayo. Amaxwebhu, iividiyo kunye nee audios zokukhuphela. Iingcebiso malunga nendlela yokuthenga, hamba inja okanye wenze eminye imisebenzi.
Izicelo malunga ne-coronavirus
Ngoku ekhaya Unokubona imephu yemeko yamazwe ahlukeneyo anjengeSpain, i-Italiya okanye iMelika. Unokwenza oku ukuya kuthi ga Iimaphu zikagoogle, ke le yenye indlela yokufunda iJografi.
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (I-WHO) isungule i-bot esemthethweni yeWhatsApp apho bakugcina unolwazi malunga nedatha yangoku ye-coronavirus. Kuya kufuneka wongeze ifowuni + 41798931892 kuluhlu lwakho lwabafowunelwa kwaye ubhale nawuphi na umyalezo. Kukho uluhlu lwemibuzo ebuzwa rhoqo malunga ne-COVID-19, iindaba zamva nje ezivela kwi-WHO kunye neentsomi malunga ne-coronavirus. Ungalufumana olu lwazi lunye kwiphepha, kodwa ke akuyi kufuneka ulikhangele.
Kwelinye icala, ukusukela nge-14 kaMatshi ophelileyo U-Apple akazamkeli izicelo inxulumene ne-coronavirus evela kumaziko avunyiweyo anjengemibutho karhulumente, ii-NGO zijolise kwezempilo, iinkampani ezinokubaluleka okwenyani kwimicimbi yezempilo nakwezonyango okanye kumaziko emfundo. IAmazon izibonakalise ngendlela efanayo.
Ulwazi lwabantwana nolwezokubelekisa
Ukuba ukhulelwe okanye kukho abantwana abancinci ekhaya sukuphambana ujonge ulwazi malunga ne-coronavirus. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukuba nolwazi olugqithisileyo kunokubangela uxinzelelo. Ngayiphi na imeko, kungcono ukuba uye ngqo kwimibutho elungiselela amaxwebhu.
Umzekelo Umbutho waseSpain wePediatrics (AEP) uyasebenzisana neCandelo eliPhezulu lezeMpilo likaRhulumente leSebe lezeMpilo kunye nokuSetyenziswa ekuyileni amaxwebhu ahlukeneyo ashwankathela ubungqina obukhoyo kwiindawo ezahlukeneyo zePediatrics. Zonke ezi ngxelo kunye neengcebiso ziyafumaneka kwiwebhu. Kodwa khumbula ukuba zezengcali.
Ngokuphathelele ukhulelwe Ukuza kuthi ga ngoku, akukangqinwa ngokwenzululwazi ukuba abasetyhini abakhulelweyo banomdla wokusuleleka. Le ntsholongwane ayisasazeki ngobisi lwebele, ngoko ke umama angalunika ubisi usana lwakhe ngaphandle kwengxaki. Namhlanje umntwana wokuqala uzelwe ngumama one-coronavirus, kuyaziwa ukuba umntwana akanako, kwaye bobabini baphantsi kolawulo olungqongqo.
Ngendlela, I-OCU sele ilumkisile malunga neoyile kunye nezinto eziyithengisayo nezingakhuseliyo ekosulelekeni konke konke. Into efanelekileyo yokuthintela kukuhlamba izandla rhoqo ngesepha kunye namanzi, kwaye ungachukumisi ubuso bakho, umlomo kunye namehlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » ICoronavirus: iifowuni kunye nokusetyenziswa ngolwazi oluchanekileyo
Umkhuhlane ebantwaneni, nini ukuba nexhala?
Ukujonga ukukhulelwa xa imozulu elungileyo ifika